China Fireproof ute rụpụta na Factory | Jiashun
Fire olulu ute, ash ute, ọkụ ute, Anụ Mmịkpọ ute ntekwasa faiba glaasi ákwà
Grey, agba ndị ọzọ nwere ike ịhazi Plastic bag packaging plus katọn, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide, ọkụ mkpuchi ọkụ, ngosipụta ọkụ. Mfe ọcha, waterproof na dustproof, ike ga-eji ugboro ugboro.
Pitgba ọkụ ọkụ, ute ash, ute ọkụ, ute anụ eji akpọ nkụ Eriri faiba glaasi akwa Grey, agba ndị ọzọ nwere ike ịhazi Plastic bag nkwakọ plus katọn, elu okpomọkụ na-eguzogide, ọkụ mkpuchi ihe, okpomọkụ echiche. Mfe ọcha, waterproof na dustproof, ike ga-eji ugboro ugboro.
Ot elu okpomọkụ corrosion eguzogide ma na inogide.
Enwere ike iji ya na mpụga, teres, maa ụlọikwuu, ala na ebe ndị ọzọ iji gbochie Mars, ọkụ na ntụ ka ọ ghara imerụ ma ọ bụ merụọ ala gburugburu olulu ọkụ ma ọ bụ oven barbecue.
Ọ bụrụ na otu n'ime ihe ndị a masịrị gị, biko mee ka anyị mara. Anyị ga-enwe afọ ojuju inye gị nkwupụta banyere nnata nke nkọwa zuru ezu nke mmadụ. Anyị nwere ndị R&D nwere ahụmịhe nke onwe anyị iji zute nke ọ bụla n'ime requriements, Anyị na-egosi na ị ga-anata ajụjụ gị n'oge na-adịghị anya ma nwee olile anya ịnwe ohere isoro gị rụọ ọrụ n'ọdịnihu. Nabata iji lelee ụlọ ọrụ anyị.
Anyị ngwọta gafere site na mba ọkà asambodo na e ọma natara anyị isi ụlọ ọrụ. Ndị otu ọkachamara ọkachamara anyị ga - adị njikere ijere gị ozi maka ịza ajụjụ na nzaghachi. A ga - ewepụta mbọ kacha mma iji nye gị ọrụ na ngwọta kacha mma. Maka onye ọ bụla na-atụle azụmahịa na azịza anyị, biko gwa anyị okwu site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo. Dị ka ụzọ ịmata anyị na ngwaahịa na enterprise. ọtụtụ karịa, ị ga-enwe ike ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị iji chọpụta ya. Anyị ga-anabata ndị ọbịa oge niile na ụlọ ọrụ anyị. iru ụlọ ọrụ. mmekọrịta anyị na anyị. Biko nwee nnwere onwe ị ga - akpọtụrụ anyị maka obere azụmaahịa ma anyị kwenyere na anyị ga - esoro ndị ahịa anyị niile kerịta ahụmịhe bara uru.
Nke gara aga: Akpa Fireproof
Osote: Fluororubber akwa